Sai Lao Kham၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
Sai Lao Kham's Apps
Sai Lao Kham's Likes
Sai Lao Kham's ၏မိတ်ဆွေများ
Sai Lao Kham's Groups
Sai Lao Kham's Discussions
Started this discussion. Last reply by အဖြူရောင်ငှက်ကလေး Feb 12, 2012. 15 Replies 1 Like
ကျွန်တော် အတော်လေး ဘ၀င်မကျ ဖြစ်နေရတာလေးတစ်ခုကို ဒီနေရာမှာ ပြောဆို ဆွေးနွေးခွင့်ပြုပါ။ ဒီတစ်ခါတော့ စကားပြေ သွက်သွက်ကလေးနဲ့ပဲ တင်ပြခွင့်ပြုပါ။ ပြောရရင်တော့ ဘာသာရေး ယောင်ယောင်…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
Started this discussion. Last reply by ဖိုးကံထူး Aug 13, 2016. 56 Replies6Likes
သာသနာတော်ကွယ်ရခြင်း အကြောင်းရင်းများကို သတ္တ၀ါများအား အစဉ်သနားသောအားဖြင့် ဟောကြားချီးမြှင့်ပေးတော်မူပါဘုရား။ (လူပုဂ္ဂိုလ်များလည်း ပါဝင်ဆွေးနွေး ကုသိုလ်တော်ယူကြပါခင်ဗျား။)ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
Started this discussion. Last reply by Sai Lao Kham Jan 3, 2012.5Replies0Likes
ရူးရခြင်း အကြောင်းရင်းများကို ဘုရားဟောနှင့်တကွ ရှင်းပြပေးပါရန်။ လေးစားလျက် (ရဟန်းတော်များအားလည်း ရိုသေစွာ ကန်တော့လျက်)ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
Sai Lao Kham သည်လက်ဆောင်မရရှိသေးပါ။
Sai Lao Kham၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ
Sai Lao Kham's Blog
ကျေးဇူးတော်ရှင် မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ဖြေကြားချက် (ရှေ့စိတ်ကို နောက်စိတ်နှင့် ရှုလို့ရပါ့မလား)
ဒီဘလော့ကို ဇန်န၀ါရီ 12, 2012 တွင်2:30am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။2Comments0Likes
တပည့်တော် လျှောက်ထားလိုတာက ရှေ့စိတ်ကို နောက်စိတ်က သိရမယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ၀ိသုဒ္ဓိမဂ်မှာ အရှင်ဗုဒ္ဓဃောသကလည်း ဒီလိုပဲဟောထားပါတယ်၊ ဒီအရှင်ဘုရားရဲ့ တရားမှာလည်း ရှေးစိတ်ကို နောက်စိတ်နဲ့ တွေ့ရမယ် ဒီလိုဆိုထားတော့ တပည့်တော်များ လက်တွေ့ လုပ်ကြည့်တော့လည်း ဒီအတိုင်းပဲလုပ်လို့ ရပါသလားဆိုတော့၊ ရပါတယ်။
တပည့်တော် ၀ီထိ လေ့လာထားတဲ့…
ဒီဘလော့ကို ဒီဇင်ဘာ 31, 2011 တွင်7:15am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။3Comments4Likes
သာသနာတော်ပြန့်ပွားရေးအတွက် နယ်စပ် ဒေသနှင့် တောင်တန်းဒေသများ၌ သာသနာပြု ကျောင်းများ ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်နေပါသည်။
အားရကျေနပ်အောင်တော့ မအောင်မြင်သေးပါ။ မအောင် မြင်ရသေးခြင်းမှာလည်း ပစ္စည်းလေးပါး အထောက် အပံ့ နည်းပါးခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာ ၀င် မြန်မာလူမျိုးများသည်
ငွေကျပ်သိန်းတစ်ထောင် သိန်းနှစ်ထောင်ကုန်၊ သုံးထောင်ကုန် ကျောင်း၊ ကန် စသည်များ ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းနိုင်ကြသော်လည်း ဗုဒ္ဓသာသနာမထွန်းကားသေးသော ဒေသများ၌ ဆင်းဆင်းရဲရဲ သာသနာပြုနေကြသော သံဃာတော် များအား ထောက်ပံ့ရန် ကိစ္စကိုမူ…
ဒီဘလော့ကို ဒီဇင်ဘာ 31, 2011 တွင်2:58am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 8 Comments5Likes
ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အမည်ခံအချို့သည် ထွက်ရပ်ပေါက်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုသူကိုလည်း
ကိုးကွယ်နေကြသည်။ ထွက်ရပ်ပေါက်ပုဂ္ဂိုလ် များတွင်လည်း အသေထွက်၊ အရှင်ထွက်
နှစ်မျိုးရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ ထွက်ရပ်ပေါက်နိုင်ရန် ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ ကျင့်သုံးခဲ့သည်ဆိုသော
ကျင့်စဉ်ကိုလည်း အမျိုးမျိုးပြောဆိုနေကြသည်။ အခြေခံအားဖြင့် အဂ္ဂိရတ်လမ်း၊ ဆေးလမ်း၊
အင်းလမ်း၊ သမထလမ်းဟု ခွဲခြားဖော်ပြနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။
ထွက်ရပ်ပေါက်နှစ်မျိုးအနက် အသေထွက်ဆိုသည်မှာ လက်ရှိဘ၀က သေလွန်ပြီးသော်လည်း
ဒီဘလော့ကို ဒီဇင်ဘာ 29, 2011 တွင်10:30pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။6Comments3Likes
“ယထာဘူတံ ဥာဏာယ သတ္တာ ပရိယေသိတဗ္ဗော -ဟုတ်မှန်သ့်အတိုင်း
သိဖို့ရန်အတွက် ဆရာရှာထိုက်သည်” ဟူသော ဒေသနာတော်အတိုင်း ဆရာ
တရားအားထုတ်ရာ၌ ဆရာရှာဖွေခြင်းသည် အိမ်ထောင်ပြု၊ ဘုရားတည် စသည်တို့ကဲ့သို့ ဘ၀မှာ အရေးကြီးဆုံး အရာတခုဖြစ်၏။ မိမိဆည်းကပ်သော
ဆရာက လမ်းလွှဲနေပြီဆိုလျှင် အချိန်ကုန်လူပန်းဖြစ်ကာ၊ အပါယ်ငရဲသို့ ကျဖို့ရန်သာ ရှိတော့၏။ သို့ဖြစ်၍ ဆရာတင်မလွှဲအောင်အဌကထာဆရာက
3:34pm အချိန်ဖေဖော်ဝါရီ 28, 2013, တွင် hla moe 24 မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ကို့ ညီရေ မွေးနေ့ မင်္ဂလာပါ...မတွေ့ တာကြာပြီ
11:35am အချိန်ဖေဖော်ဝါရီ 28, 2013, တွင် ♣တောသူမလေး♣ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
11:20am အချိန်ဒီဇင်ဘာ 20, 2012, တွင် hla moe 24 မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
အဆင်ပြေလားညီ...လုံးဝမတွေ့ တောပါ..အခက်ခဲး ရှိလဲး ညီအကိုတွေမှတ်ပြီး
4:25pm အချိန်အောက်တိုဘာ 30, 2012, တွင် ♣တောသူမလေး♣ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
6:42pm အချိန်မတ် 11, 2012, တွင် လွမ်းဧကရီ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
11:43pm အချိန်ဖေဖော်ဝါရီ 28, 2012, တွင် နီစံ (အနီ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ကိုစိုင်းရေ မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ
7:28am အချိန်ဖေဖော်ဝါရီ 28, 2012, တွင် hla moe 24 မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
မွေးနေ့မင်္ဂလာပါ ညီ စိုင်း စိုင်း
7:07am အချိန်ဖေဖော်ဝါရီ 14, 2012, တွင် လွမ်းဧကရီ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
8:46pm အချိန်ဖေဖော်ဝါရီ 11, 2012, တွင် နီစံ (အနီ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
4:20pm အချိန်ဖေဖော်ဝါရီ 1, 2012, တွင် hla moe 24 မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
လာလည်သွားတယ်ညီလေး သတိရမိလို့ ပါ